DXF: Maxaad ka ogaan laheyd qaabka feylkaan | Qalabka bilaashka ah
DXF: Maxaad ka ogaan laheyd qaabka feylkaan
Isaac | | General, Daabacaadda 3D
Waxaa laga yaabaa inaad u timid qodobkaan maxaa yeelay waad ogtahay faylasha qaab DXF ah oo waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato wax badan oo iyaga ku saabsan, ama si uun xiisaha aad u qabto maxaa yeelay ma aqoon iyaga. Xaalad ahaan mid kale, waxaan isku dayi doonaa inaan ku tuso dhammaan waxyaabaha aasaasiga ah ee ay tahay inaad ka ogaato qaabkan feylasha ah ee aadka muhiimka ugu ah dhanka qaabeynta.
Intaa waxaa dheer, waa inaad ogaataa inay jiraan kuwo badan software la jaan qaada leh qaabkan, oo kaliya ma ahan AutoCAD inuu keydin karo naqshadaha ama ka furan karo DXF. Xaqiiqdii, fursadaha ayaa aad u tiro badan ...
1 Waa maxay DXF?
2 Software la jaan qaadi kara
3 3D iyo DXF daabacaadda
4 DXF loogu talagalay daabacaadda 3D iyo CNC
Waa maxay DXF?
DXF waa soo gaabinta magaca Ingiriisiga Qaabka Isweydaarsiga Darwing. Qaab feyl ah oo leh kordhin .dxf ah oo loo adeegsado sawirrada kombiyuutarka lagu caawiyo ama naqshadaha, taas oo ah, CAD.
Autodesk, milkiilaha iyo soosaaraha softiweerka caanka ah ee AutoCAD, ayaa ahaa kii abuuray qaabkan, gaar ahaan si loo suuro galiyo isdhexgalka ka dhexeeya faylasha DWG ee ay adeegsadaan barnaamijyadooda iyo barnaamijyada kale ee la midka ah ee suuqa.
Kac markii ugu horeysay in 1982, oo ay weheliso nooca koowaad ee AutoCAD. Waana markii waqtigu dhammaaday ee DWGs ay noqdeen kuwo sii murugsan, oo marin u qaadisteeda DXF ay dhib noqotay. Dhammaan howlihii u hoggaansanaanta DWG looma wareejin DXF tanina waxay u horseeddaa arrimaha iswaafajinta iyo ismaandhaafka.
Halkaas, DXF waxaa loo abuuray nooc ka mid ah feylka isdhaafsiga sawirka inuu noqdo a qaab caalami ah. Sidan oo kale, moodooyinka CAD (ama 3D) ayaa lagu kaydin karaa oo loo isticmaali karaa softiweer kale ama taa lidkeed. Taasi waa, qof walba wuu ka dhoofsan karaa ama ka dhoofin karaa ama qaabkan si fudud.
DXF waxay leedahay qaab dhismeed la mid ah keydka xogta, ku keydinta macluumaadka gudaha qoraal cad ama laba-geesood si loo sharraxo qaabka iyo wax kasta oo ay u baahan tahay dib u dhiska kan.
Software la jaan qaadi kara
Ma jiraan wax aan dhammaad lahayn barnaamijyada barnaamijyada kuwaas oo ku xamili kara faylalkaan qaab DXF ah, qaar ayaa furi kara oo soo bandhigi kara naqshadaha, kuwa kale sidoo kale wey soo dejin karaan / dhoofin karaan sidoo kale wax ka badali karaan naqshadaha.
inta u dhaxaysa liiska barnaamijka yaqaan oo la jaan qaadi kara DXF ayaa iftiimin doonta:
Qase (adoo adeegsanaya qoraalka soo dejinta)
Xafiiska Microsoft (Word, Visio)
Dukaanka rinjiga ee pro
Sida laga soo xigtay madal kaas oo aad ku shaqeyso waxaad isticmaali kartaa hal ama codsiyo kale. Tusaale ahaan:
Android- Waxaad isticmaali kartaa AutoCAD oo waliba loo heli karo aaladaha mobilada isla markaana aqbala DXF.
Windows- Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa AutoCAD iyo Dib u eegista Naqshadeynta kuwa kale, sida TurboCAD, CorelCAD, CorelDraw, ABViewer, Canvas X, Adobe Illustrator, iwm.
macOS: Waxaa jira dhowr barnaamijyo caan ah oo caan ah, midkoodna waa AutoCAD, laakiin sidoo kale waxaad leedahay SolidWORKS, DraftSight, iwm.
Linux: mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna isticmaalka badan waa LibreCAD, laakiin waxaad kaloo isticmaali kartaa DraftSight, Inkscape, Blender, FreeCAD, iwm.
Browser: inaad ka furto DXF khadka tooska ah, iyadoon loo baahnayn barnaamijyo, waxaad sidoo kale ka samayn kartaa biraawsarka aad jeceshahay ShareCAD ama sidoo kale ProfiCAD.
Dabcan, waxaa jira aalado toos ah iyo kuwo maxalli ah beddelid inta udhaxeysa qaabab fayl oo kaladuwan, oo ay kujirto DXF. Sidaa darteed, waad u rogi kartaa ama ka beddeli kartaa qaabab kale dhib la'aan. In kasta oo aanan dammaanad ka qaadayn in naqshaddu isku mid noqon doonto ama wax qaldan ...
3D iyo DXF daabacaadda
Haddii aad isticmaasho a Yazici 3D waa inaad ogaataa inay sidoo kale jiraan barnaamijyo loogu talagalay loogu beddelo qaabab kala duwan aad u xiiso badan. Waa kiiska labadan nooc:
Meshlab: Ilo furan, softiweer la qaadan karo oo si ballaaran loogu adeegsado ka shaqeynta iyo wax ka beddelka meheshada 3D. Waxaad ku abuuri kartaa walxaha qaabab kala duwan, sida OBJ, OFF, STL, PLY, 3DS, COLLADA, VRML, GTS, X3D, IDTF, U3D iyo, dabcan, DXF. Waxaa loo heli karaa Linux (labadaba xirmooyinka 'Snap Snap' iyo 'AppImage' wixii loo yaqaan 'distro'), macOS, iyo Windows.
MeshMixer: wuxuu la mid yahay kii hore, badal. Xaaladdan oo kale sidoo kale waa bilaash oo waxaa loo heli karaa macOS iyo Windows.
DXF loogu talagalay daabacaadda 3D iyo CNC
Iyada oo ay ku soo bateen 3D daabacaadda iyo mashiinnada CNC Warshadaha, faylasha DXF waxay noqdeen kuwo muhiim ah. Waa inaad ogaataa inay jiraan degello internet ah oo kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo faylasha DXF oo leh nashqado diyaar ah si loo fududeeyo dhismaha walxaha. Habkaas, uma baahnid inaad adigu iyaga abuurto, taas oo waxtar weyn leh, gaar ahaan haddii aadan aqoon sida loo maareeyo barnaamijka CAD.
Waxaa jira degello internet ah oo qaarkood lacag la bixiyo, taasi waa, waa inaad bixisaa rukhsad si aad awood ugu yeelatid naqshadaha oo aad si xor ah ugu soo dejiso Kuwa kale ayaa ah bilaash, wax walbana waad ka heli kartaa. Laga soo bilaabo astaamaha fudud si aad uga abuuri karto DXF oo lagu soo dejiyey mashiinkaaga, walxaha, qurxinta, alaabta guriga, taarikada, iwm.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad bilowdo tijaabinta DXF mid ka mid ah barnaamijyada softiweer ee kor lagu soo sheegay, waxaan kugula talinayaa inaad ka faa'iideysato mid ka mid ah kuwan websaydhada bilaashka ah:
DXF Wixii CNC
Naqshadeynta DXF CNC
Faylasha CNC DXF
Así waxaad baran doontaa qaabka iyo naqshadahan, ama tijaabi mishiinka aad soo iibsatay si aad u aragto inuu shaqadiisa si sax ah u qabanayo ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Daabacaadda 3D » DXF: Maxaad ka ogaan laheyd qaabka feylkaan
Deji fur: waxa ay tahay iyo codsiyada